Ungayifundisa kanjani inja ukuthi ingaluma | Izinja Zomhlaba
Ungayifundisa kanjani inja ukuthi ingaluma
UMonica Sanchez | | Ukuziqeqesha
Izinja yizilwane ezisebenzisa imilomo yazo ukuhlola konke. Ikakhulukazi lapho bengumdlwane, bangaba nokuthambekela okuhle kokuluma izandla, izinyawo, ifenisha, izicathulo ... ngamafuphi, konke abakutholayo. Lokhu kuziphatha kungahle kuhlekise ekuqaleni, kepha njengoba inja ikhula, amazinyo ayo ayaqina, kulapho-ke kungalimaza kithina nakwezinye izinkungu eziphakathi kokuhamba.
Ukugwema izinkinga, kubaluleke kakhulu ukwazi ungayifundisa kanjani inja ukuthi ingaluma. Futhi sizokhuluma ngakho kulesi sihloko. Landela lezi zeluleko ukuze inja yakho yazi ukuthi kufanele iziphathe kanjani.
1 Izitho zomzimba akuyona into yokudlala
2 Ngenzenjani uma izoluma enye inja noma umuntu epaki?
Izitho zomzimba akuyona into yokudlala
Noma ngabe umdlwane noma umuntu omdala, enye yezinto zokuqala okufanele simenze aqonde ukuthi umzimba womuntu awulona ithoyizi. Njalo lapho ezama ukusiluma, noma ngabe kuyadlala, sizothi QHA ngokuqinile, ngaphandle kokumemeza, bese simfulathela. Uma uzama ukusikhohlisa, ngeke sikulalele. Kumele afunde ukuthi asifuni ukuthi asilume, futhi ngalokho kumele ahlanganise ukufuna ukusiluma ngento engemihle (kubalulekile: akumele ashaywe noma athethiswe, ngoba lokhu kuzomenza esabe nje): »njalo uma ngiluma, bayangiziba». Mnikeze okumnandi (ukuphulula, ukuphatha izinja, ithoyizi) uma imizuzwana eyi-10 isidlulile futhi ubelungile.
Enye inketho uyiqondise kabusha. Wenza kanjani? Empeleni kulula kakhulu: njalo lapho ezama ukukuluma, mfundise ukuphatha inja futhi umenze aye endaweni ethile: ngokwesibonelo, uma esofeni, ngosizo lomuthi sizokwehlisa, simnikeze umyalo oyisisekelo (njengokuhlala) sizokunikeza umklomelo.
Kufanele ube njalo. Inja idinga ukuphinda isenzo esifanayo kaningana ukuze ikwazi ukusiqonda futhi, ngaphezu kwakho konke, isikhumbule. Kepha umsebenzi ekugcineni uwufanele. Phakade.
Ngenzenjani uma izoluma enye inja noma umuntu epaki?
Akekho othanda ukubona inja yakhe izama ukuluma enye inja noma umuntu. Kuyisimo esingemnandi neze kubo bobabili umfuyi wezilwane kanye "nesisulu." Ukwenza? Ngokuhlangenwe nakho ngingakutshela ukuthi into enhle kakhulu ongayenza qhubeka uzolile.
Uma ubona inja yakho eqala ukuzizwa isenkingeni noma ingakhululeki (izinwele ezinamakhanda, iqala ukukhombisa amazinyo, iqondise umsila wayo), thatha lapho. Mbeke ku-leash futhi, ngaphandle kokusho igama, uye ekhoneni elikude, lapho inja ingehlisa khona umoya. Menze akhonze kancane ngokufafaza izingcezu zesoseji noma zokuphatha i-doggie phansi. Lokhu kuzokusiza uphumule.
Ngaphambi kokubuyela epaki, ngincoma lokho qhubeka uzijwayeza ekhaya futhi uhambe ngezinyawo emigwaqweni lapho kungenabantu abaningi ngokuvamile abahamba nezinja zabo. Kuphela lapho ubona ukuthi ekugcineni useqonde ukuthi akakwazi ukuluma, kulapho kuphela lapho ungazama khona futhi.
Uma udinga usizo olwengeziwe, unganqikazi ukubuza i- umqeqeshi wezinja lokho kusebenza kahle.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ungayifundisa kanjani inja ukuthi ingaluma
Ungayisebenzisa kanjani i-clicker ukuqeqesha inja yakho
Amaqiniso ngeGos d'Atura Català noma inja yoMalusi waseCatalan